I-Nintendo ijongene nomthetho wokuqala weNintendo Shintsha u-Joy-Con | Iindaba zeGajethi
Kumaxesha akutshanje sibonile ukuba ii-troll ze-patent ziye zaba njani enye yeengxaki ezinkulu ezijongana neenkampani ezinkulu, Iitroli ezingatyali imali kwi-R & D kodwa zithenga iinkampani ezinamalungelo abenzi kwaye emva koko uqale ukumangalela amakhwenkwe amakhulu ukuze usike.
Ityala esithetha ngalo namhlanje ayimalunga ne-patent troll, kodwa malunga nenkampani Uthathe inxaxheba kwimveliso yemidlalo yevidiyo iminyaka embalwa: Umdlalo. Ngokwenkampani, iNintendo Joy-Con ngokucacileyo iphefumlelwe yiWikipad yale nkampani.
Njengoko kulisiko kwezi ntlobo zamatyala, ngakumbi ukuba inkampani enkulu iyabandakanyeka, I-Gamevice icele ukunqunyanyiswa kwentengiso kunye nokusasazwa kwazo ngelixa ityala liqhubeka, ekucacileyo ukuba ayizukwenzeka.
Njengoko sibona kumfanekiso ongentla, iNintendo inokuba nengxaki enkulu kule nkampani, ukusukela ukufana kusengqiqweni. UNintendo akazange ayibhalise iNintendo switch kude kube ngo-2014, ngelixa inkampani yeGamevice ibhalise zombini iWikipad kunye neenguqulelo zayo ezahlukeneyo ngo-2012, kwiminyaka emibini ngaphambili.
Ngokuqinisekileyo akukho namnye kuni usebenzise isixhobo kule nkampani, kodwa kunjalo ifuna ukusebenzisa ngokupheleleyo inkuthazo ebonakala ngathi iyisebenzisile uNintendo xa kusenziwa abalawuli beNintendo switch. Njengoko sibonile kwiminyaka yakutshanje, ukuba enye imveliso iyafana nenye ayiqhelekanga ngokufanayo nokukopa, njengoko sibonile kwiminyaka eyadlulayo xa u-Apple wamangalela i-Samsung kwi-Samsung Galaxy yokuqala eya kwimarike.
Ezi ntlobo zeemfuno, ihlala ithatha ixesha elide kwaye ukuba kuthatha ixesha elide, ngamanye amaxesha inkampani yommangalelwa, kule meko uNintendo, ufuna ukufikelela kwisivumelwano kwezoqoqosho ngaphandle kwenkundla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Iiconsoles » UNintendo ujongene netyala lokuqala leNintendo Guqula u-Joy-Con